China Vietnam- MIC Service uye Kuyedza | MCM
IetVietnam MIC Certification
Denderedzwa 42/2016 / TT-BTTTT yakaraira kuti mabhatiri akaisirwa nhare mbozha, mapiritsi uye mabhuku emabhuku haabvumirwe kuendeswa kuVietnam kunze kwekunge aiswa pasi peDecC chiitikisi kubva muna Gumiguru 2016. DoC inozodiwa zvakare kuti ipe kana uchishandisa Rudzi rweKubvumidzwa kwezvinhu zvekupedzisira (nhare mbozha, mapiritsi uye mabhuku ekunyorera).
MIC yakaburitsa Circular 04/2018 / TT-BTTTT nyowani muna Chivabvu, 2018 iyo inotaura kuti hapasisina IEC 62133: 2012 mushumo wakaburitswa nemarabhoritari anotenderwa mhiri kwemakungwa anotambirwa muna Chikunguru 1, 2018. Kwayedza yemuno inokosha panguva yekukumbira chitupa cheADOC.
QCVN101 ： 2016 / BTTTT （kureva IEC 62133 ： 2012)
Hurumende yeVietnamese yakapa chirevo chitsva Nha. 74/2018 / ND-CP muna Chivabvu 15, 2018 yekutaura kuti mhando mbiri dzezvinhu zvakaunzwa kuVietnam zvinoiswa pasi pechirongwa chePQIR (Product Quality Inspection Registration) painotumirwa kuVietnam.
Kubva pamutemo uyu, Ministry of Information and Communication (MIC) yeVietnam yakaburitsa gwaro repamutemo 2305 / BTTTT-CVT musi waChikunguru 1, 2018, ichiti zvigadzirwa zviri pasi payo (kusanganisira mabhatiri) zvinofanirwa kunyorerwa PQIR painotengwa kunze kwenyika. kupinda muVietnam. SDoC ichaendeswa kuti izadzise tsika yekubvisa tsika. Zuva repamutemo rekupinda musimba kwemutemo uyu ndiAugust 10, 2018. PQIR inoshanda kune imwechete yekutumira kuVietnam, ndiko kuti, pese panopinza zvinhu kunze kwenyika, anonyorera PQIR (batch kuongorora) + SDoC.
Nekudaro, kune vanounza kunze vanokasira kupinza zvinhu vasina SDOC, VNTA inozoongorora kwenguva pfupi PQIR uye kufambisa tsika yekubvumidzwa. Asi vatengesi vanobva kunze kwenyika vanofanirwa kuendesa SDoC kuVNTA kuti vapedze kuita kwese kwetsika mukati memazuva gumi nemashanu ekushanda mushure mekubvumidzwa kwetsika. (VNTA haichazobuditsa yapfuura ADOC iyo inoshanda chete kuVietnam Vagadziri Vemuno)
● Mugoveri Wazvino Ruzivo
MCM inoshamwaridzana neMIC inogovana yazvino Vietnam setifiketi nhau.
● Co-muvambi webhatiri yekuyedza laboratori nehurumende yemuno
Laborator yekuyedza bhatiri yakavambwa muna2017 nehurumende yeVietnam neMMM, inova ndiyo chete nzvimbo yekutarisisa ine kukwana kwakazara kweQCVN101: 2016. Uye MCM nokudaro inova yega mumiriri webazi iri mu Mainland China, Hong Kong, Macau neTaiwan.
● Suggester yeVietnam inosungirwa certification yezvigadzirwa zvebhatiri
Iyo lab yakabatanidzwa neMMM inoitisa kuyedzwa kwechigadzirwa uye Certifctaion nepo MIC iri mutoro wekupa mutemo wepamutemo wechitupa nemutemo. Miviri miviri iri mushandirapamwe kunyatsobatana mukusimudzira kuvandudzwa kwekuyedzwa kwebhatiri uye chitupa muVietnam.
● Imwe-yekumira Agency Service
MCM, inoenderana-inomira agency, inopa kuyedza, chitupa uye sevhisi sevhisi kune vatengi.
Pashure: India - CRS
Zvadaro: Marazhiya- SIRIM
Bhatiri Vietnam Mic
Bhatiri Vietnam Pqir
Vietnam Certification Mutengo
Vietnam Certification Maitiro
Vietnam Certification Service
Vietnam Mic Chitupa
Vietnam Mic Certification Mutengo
Vietnam Mic Certification Maitiro
Vietnam Mic Chitupa Sevhisi
Vietnam Mic Lead Nguva
Vietnam Mic Chirevo
Vietnam Mic Inodikanwa
Vietnam Mic Tsanangudzo
Vietnam Mic technical Zvinyorwa
Vietnam Mic technical Inodikanwa
Vietnam Mic Bvunzo
Vietnam Mic Bvunzo Zvinhu
Vietnam Mic Bvunzo Nzira
Vietnam Mic Bvunzo Chiitiko
Vietnam Mic Kuedza
Vietnam Mic Kuedza Lab
Vietnam Mic Kuedza Laborator
Vietnam Mic Kuedza Mutengo
Vietnam Mic Kuedza Service
Vietnam Mic Kuedza Nguva
Vietnam Kuedza Mutengo
Vietnam Kuedza Service